Kitapom-bola ho an'ny orinasa 4 maimaim-poana: sarintsarim-bitsika, flyers, bokikely ary karatra fandraharahana | Famoronana an-tserasera
Raha mitady loharano maimaimpoana ho an'ny orinasa ianao na hiasa amin'ny sarin'ny orinasa na orinasa, anio dia hataoko mora be ho anao izany. Imbetsaka izahay no nizara ny fanangonana sy ny loharanom-pahalalana ho an'ity karazana asa ity ary androany dia te-hanokatra ny vatan'ny fahatsiarovana sy hanavotra ny sasany amin'ireto fonosana ireto aho satria azoko antoka fa mihoatra ny iray no tena ilaina. Ireto ambany ireto no ahitanao safidy efatra an'ny brochure, mock-up, flyer ary karatra fandraharahana amin'ny endrika PSD azo ovaina tanteraka ary tsara indrindra… maimaim-poana!
Manoro hevitra anao aho hampiasa ireo singa ireo ho fototry ny asa ary koa ho endrika aingam-panahy. Aza misafidy ny fomba mora ary mampihatra azy ireo toy ny mahazatra. Ampidiro ny fanovana sy ny fiolahana amin'ny endrika izay hitanao amin'ny modely, mpamorona zavatra izahay, sa tsy izany?
30 maimaim-poana ho an'ny orinasanao na orinasa: Mety amin'ny fampiroboroboana hetsika, orinasa na serivisy amin'ny fomba mazava, kanto ary mivantana.
10 maodely flyer azo ovaina azo ovaina tanteraka amin'ny endrika PSD: Azo ampiasaina amin'ny hetsika sy fety tsy tambo isaina izy ireo. Ny ankamaroany dia mazàna manana endrika vaovao sy tanora satria, ambonin'izany rehetra izany, dia ampiasaina hampiroborobo ny fety sy ny fialamboly.
Fanesoana maimaim-poana 10 tokony ho fantatrao amin'ny maha mpamorona anao: Izy ireo no fomba tsotra sy madio indrindra hanehoana ny volavolanay sy ny sanganasanay. Izy ireo dia miasa toy ny taolam-paty na maodely izay mora tokoa ny mampifanaraka ny sarinay.
Tapakila karatra 100 maimaimpoana tanteraka: Klasika izy ireo, ary mandaitra indrindra amin'ny fampandrosoana ny marika manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Kitapom-bola ho an'ny orinasa 4 maimaim-poana: sarintsarim-bitsika, flyers, bokikely ary karatry ny orinasa